Ny Galaxy S6 dia mametraka rakitsoratra vaovao ao amin'ny AnTuTu | Androidsis
Ny Galaxy S6 dia mamakivaky AnTuTu izay manondro ny tsipiriany rehetra ao aminy
Afaka herinandro vitsivitsy Ho fantatsika ny zava-drehetra momba ny sainam-pirenena vaovao an'ny orinasa Samsung, ny Galaxy S6 vaovao. ny terminal vaovao izay antenaina betsaka kokoa amin'ity fanontana vaovao ity hahitana raha azo atao ny miala amin'ny maodely taloha tamin'ny taona lasa. Fanampiny vaovao iray hafa izay efa antenainay ho fantatra hialana amin'ny fisalasalana amin'ny andro voalohan'ny volana martsa rehefa aseho ao amin'ny MWC 2015.
Androany dia iray amin'ireo andro ahafahantsika mamantatra ny antsipiriany rehetra an'ity telefaona ity misaotra ny fandalovany amin'ny iray amin'ireo fitaovana benchmarking malaza indrindra manao ahoana AnTuTu. Ho fanombohana, ny maodely manokana Galaxy S6 izay hita tamin'ny alàlan'ity fitaovana ity dia ny SM-G925W8. Ity fitaovana ity dia misy ao anatin'ny chip Exynos octa-core 7420, CPU noforonina tamin'ny 14 nm ary miaraka amin'ny sary ARM Mali-T760.
1 S6 miaraka amin'i Exynos
2 Firaketana isa vaovao ho an'ny Galaxy S6
S6 miaraka amin'i Exynos
Ity maodely hita ao amin'ny AnTuTu ity dia manana Samsung tenany ho mpanamboatra ny chip Exynos azy manokana amin'ny 14 nm. dia tsy maintsy Ampitahao amin'ny an'ny Snapdragon 810 izany Qualcomm's dia natsangana teo ambanin'ny 20nm. Fahasamihafana tokony horaisina.
Ho an'ny inona ny ambiny manokana amin'ny famaritana, a Efijery Super AMOLED 5.1-inch manana vahaolana 1440 x 2560, RAM 3 GB, fitehirizana anatiny 32 GB, fakan-tsary 20 megapixel aoriana ary fakan-tsary 5 MP eo alohan'izay hitondranao ny karazana selfie. Raha ny zavatra hitantsika amin'ireo masontsivana ireo dia mitovy amin'ny niseho tamin'ny tsaho samihafa tato anatin'ny herinandro lasa izay.
Firaketana isa vaovao ho an'ny Galaxy S6
Ny Galaxy S6 vaovao dia nametraka a firaketana vaovao ho an'ny AnTuTu manana isa 60.978. Ary ny toerana nihatsara an'ity chip Exynos 7520 vaovao ity raha oharina amin'ny Exynos 5433 taloha dia eo amin'ny sary an-tsary ireo zavatra 3D. Kalitao iray ahazoana tombony amin'ny filalaovana lalao tsara ny filalaovana amin'ny Android sy ny mpampiasa rehetra izay manana fitaovana finday.
Ny hetsika Unpacked hanolotra ny Galaxy vaovao dia amin'ny 1 martsa, ka tsy misy mihoatra ny herinandro vitsivitsy. Na eo aza izany dia mbola hanana vaovao vaovao isika ary azo antoka kokoa ny sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy S6 dia mamakivaky AnTuTu izay manondro ny tsipiriany rehetra ao aminy
Pepe Espinar Vega placeholder sary dia hoy izy:
Saingy tsy nilaza izy ireo omaly fa ny Galaxy S6 dia hitondra 4 GB Ram?
Isan'andro dia tsy mino an'izany vaovao rehetra miseho eto izany aho.
Valiny tamin'i Pepe Espinar Vega
Ity lahatsoratra ity dia navoaka ho tsaho. Ary amin'ny honohono dia tsy misy mihitsy ny raikitra, vaovao androany ny tena rehefa mandalo benchmarking, saingy hiharan'ny fanamafisana ofisialy hatrany izany.
Sony Xperia Z4 dia nandalo ny tanan'i Geekbench niaraka tamin'i Snapdragon 810
OnePlus dia manova ny paikadin'ny varotra fanasana